# महिला स्वास्थ्य #बच्चा #मानसिक रोग #कोभिड #कोरोना #हाड जोर्नी #सुत्केरी #तनाव #डिप्रेसन #आत्महत्या
महिला स्वास्थ्य : आजको आवश्यकता
महिलाले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्या ,सामाजिक अड्चन, स्वस्थ रहने विधि र चुनौतीहरु
डा. सुमिता प्रधान
सोमवार, जेष्ठ ३१, २०७८ मा प्रकाशित
पुरुषहरूको तुलनामा महिला स्वास्थ्य नितान्त फरक, जटिल र संवेदनशील रहन्छ । महिनावारी चक्र, गर्भावस्था, जन्मान्तर, मेनोपज लगायतका सामान्य लाग्ने आधारभूत प्रक्रिया अधिकांशमा समस्याका रूपमा रहने गरेका छन् ।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा जानकारी हुँदा हुँदै पनि र धेरैजसो महिलाहरू समस्या भोगिरहँदा पनि चिकित्सक तथा महिला रोग विशेषज्ञको सम्पर्कमा पुग्न हिचकिचाउँछन् । पहिलो भेटमै चिकित्सक समक्ष आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा राख्न अप्ठेरो मान्ने वा आफ्नो व्यक्तिगत समस्या राख्न लाज मान्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश महिलाहरू ठुलै समस्या नभै चिकित्सक सम्म न आइपुगेका पाइन्छन् । कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या समाधान र उपचारका लागि नै भनेर खटिएका चिकित्सक बिरामीको जिज्ञासाले हैरान हुन्छन् वा आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुन्छ भनेर सोच्नु एकदम गलत हो । स्वास्थ्य परीक्षणको समयमा हुने असहजता सामान्य हो । यस सामान्य असहजलाई चिर्दै चिकित्सक सङ्ग परामर्श लिनु स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि अपरिहार्य कुरा हो । यस कारण नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हरेक वर्ष चिकित्सकलाई भेट्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
महिलाको स्वास्थ्यका विषयमा चिकित्सक के सोच्छन् ?
चिकित्सकको मुख्य ध्यान भनेको बिरामीको समग्र स्वास्थ्यको बारेमा हुन्छ । बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू राख्नुको कारण सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा कुनै जोखिम छ कि छैन, वा कुनै रोगको लक्षणहरू छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्नका लागि हो । जब बिरामीको स्तनमा दुखाई भएको अथवा पेटमा असहज महसुस भएको, योनीबाट रक्तस्राव भएको, मलद्वारबाट रक्तस्राव हुने आदि विषयमा बताउँछन् तब मात्र चिकित्सकले बिरामीको रोग पहिचान गर्न सक्छन् । रोग पहिचान गर्ने क्रममा चिकित्सकले राख्ने अनेक प्रश्न, गरिने थुप्रै परीक्षणहरूको बखत बिरामीको मनमा आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी हजारौँ कुरा खेल्नु असामान्य होइन । बिरामीका यिनै कुराको सम्बोधन गर्नेका लागि नै चिकित्सक सेवामा हुन्छन् । जब चिकित्सकले बिरामीलाई स्वास्थ्यसँगै जोडिएका केही व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन् । त्यसको एक मात्र उद्देश्य भनेको तपाईँको जीवनशैली र तपाईँले भोगिरहेको स्वास्थ्य समस्याको अन्तरसम्बन्ध छ कि छैन भन्ने जानकारीका लागि मात्र हो ।
एक चिकित्सकले दैनिक धेरै सेवाग्राहीसँग भेटघाट गर्ने, परामर्श दिने भएकाले कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरालाई ध्यानमा राख्ने सम्भावना नै हुँदैन र चिकित्सकको खराब नियत पनि हुँदैन ।कुनै पनि चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षाको सुरुवात मै आफ्ना बिरामीको स्वास्थ्य समस्या प्रति उच्च गोपनीयता राख्ने शपथ खाएका हुन्छन् । यस कारण पनि चिकित्सकलाई आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका बारे भनिने कुराहरू नितान्त गोप्य हुन्छन्। विशेष गरी महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गराउन डराउँछन् । शरीरमा हुने दुखाई, वा लाजको कारण पनि सकेसम्म परीक्षण गराउन नखोजेको देखिन्छ । त्यसबाहेक विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कहीँ कतै दुर्व्यवहार भोगेको भएमा पनि यस्तो हुनसक्छ । तर यी कुराहरूलाई स्वास्थ्य भन्दा माथि राख्नु हुँदैन र कदाचित दुर्व्यवहार भएमा कानुनी उपचार लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
चिकित्सकले परीक्षण तथा उपचारका क्रममा रोगको सङ्क्रमण, अस्वाभाविक घाउ तथा अन्य समस्याहरू कहाँबाट, कहिलेबाट सुरु भए भन्ने कारण खोज्नु स्वाभाविक हो । सकेसम्म यी कुराहरू चिकित्सकले नसोधीकनै बिरामीले आफै भन्नु पर्छ, यदि भन्न अप्ठ्यारो लागेको खण्डमा आफूलाई असहज भएको जानकारी चिकित्सकलाई दिनुपर्छ । यी प्रश्नको उत्तर पछि मात्रै बिरामीले सही उपचार पाउन सक्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा कोरोना महामारीको कारण बिरामी भए पनि मानिसहरू अस्पताल आउन हिचकिचाइरहेका छन् । सकेसम्म अस्पताल नजानु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि स्वास्थ्यका हिसाबले उचित नहुन सक्छ । हामीले कोरोना महामारीको समयमा अस्पताल नगई आफ्नो रोगका लक्षण तथा समस्या बेवास्ता गर्ने गरेको देखिरहेका छौँ । यसरी बस्नु आफ्नो स्वास्थ्यका लागि नै हानिकार छ ।
समयमै अस्पताल पुगियो भने सामान्य ओपिडीबाटै निको हुने कुराले समय घर्किएपछि धेरै दुख दिन सक्छ । त्यसैले महिलाहरूले निम्न समस्याहरू देखिएको खण्डमा तुरुन्तै अस्पताल पुग्नु पर्छ । जस्तै
१. पेल्विकको नयाँ दुखाई सुरु भएमा
अत्यन्त दुखाई भएमा (जसका कारण उठ्न÷बस्न देखि सामान्य काम गर्न समेत नसक्ने गरी), आराम र दुखाई कम गर्ने औषधिले पनि काम नगरेमा
२. अधिक श्राव भएमा
अधिक रक्तस्राव भई कमजोर, रिँगटा लाग्ने अथवा लगातार रक्तस्राव भएमा
३. स्तन समस्या
यदि स्तनमा नयाँ गाँठोहरू अनुभव भएमा(त्यो नदुख्न पनि सक्छ) विशेषतः ४० वर्ष नाघेको वा परिवारमा पहिले कसैलाई स्तन क्यान्सर वा पाठेघर क्यान्सर भएमा
४. महिनावारी रोकिइसकेको अवस्थामा रक्तस्राव भएमा
५. मलद्वारबाट रक्तस्राव भएमा
यदि तपाईँलाई ताजा रगत वा कालो रक्तस्राव भएमा, दिसा गर्न समस्या भएमा, झाडापखाला वा आउँ, तौल घट्ने, भोक नलाग्ने र कमजोर भएमा
६. घरेलु हिंसाका कारण डिप्रेसन वा चिन्ता भएमा
शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायमा निवेदन दिई, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनाका लागि चिकित्सकको परामर्श पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
हामी कसरी फिट रहन सक्छौँ ?
स्वस्थ जीवनशैलीको आधार सामान्य छ । हामी धेरै वर्ष बाँच्न तथा स्वस्थ जीवन बिताउनका लागि नियमित व्यायाम र सन्तुलित भोजन अपरिहार्य छ । उच्च तौल भएमा त्यसले क्यान्सर, डायबिटिज, मुटु रोग जस्ता विभिन्न खतराका अवस्थाहरू निम्त्याउन सक्छ । सामान्य हिँडाई, टहल्नु वा नाच्नु तथा सन्तुलित भोजनले नै महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । सन्तुलित भोजनले स्वास्थ्य शरीर, शारीरिक विकास का लागि आवश्यक भिटामिन, मिनिरल लगायत पोषक तत्त्व प्रदान गर्दछ ।
विश्वभर विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच निकै नै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरूमा अझ बढी योजना बिना गर्भवती हुने, योजना बिनै बच्चा जन्माउने, गर्भपतन गराउने खतरा बढ् दो छ । अझ भन्नुपर्दा आर्थिक भार, अशिक्षा, जीवन बिमा नहुनु र यातायातको अभाव, कार्य तालिका समायोजन नहुनु, पारिवारिक असहयोग हुनु जस्ता कारणहरू महिलाको स्वास्थ्य पहुँचमा बाधक बनेका छन् जसको मुख्य जिम्मेवार समस्या लैङ्गिक विभेद नै हो ।
यसका लागि सरकार, समुदाय, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक क्षेत्रको पहल आवश्यक छ जुन सबैको जन्मसिद्ध मानव अधिकार हो । स्वस्थ खानपान र जीवनशैली नै जीवनभर रोग लाग्न नदिने र सुखी जीवन बिताउने उत्कृष्ट साध्य हो । तर महिलाहरूको अव्यवस्थित दैनिकी, घरधन्दा, व्यस्त जीवनशैली र अन्य धेरै कुराले स्वस्थका हिसाबमा महिलाहरू पछाडि परेका छन् । तर यी सबै कुराभन्दा माथि उठेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफू स्वस्थ रहनका लागि अपनाइने आचरण र जीवनशैली परिवर्तनका लागि कहिल्यै ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत रहौँ ।
जी. आइ. सर्जन (पेटरोग शल्य चिकित्सक),
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महराजगंज
Contact : +977 +977 9865431457
Dr. Sangeeta Bhusal
©2021dacsaab.com सर्वाधिकार सुरक्षित